Inowanikwa Firefox 15 Beta 1 ine inonakidza nhau kune vanogadzira | Kubva kuLinux
Ndine shamwari inovandudza webhu uye anogara achindiudza chimwe chinhu chandinogovana kana 100%:
Firefox ndiyo yakanakisa browser pamusika, kunyanya pakushandisa vanogadzira, zvisinei, mazhinji acho haatomboshandisa zvishandiso zvese zvavanopihwa nebrowser iyi.
Uye akarurama chaizvo. Zvakangobuda sezvinoita anoti Firefox 15 Beta 1 uye inounza nemidziyo inonakidza kwazvo yevanogadzira webhu, iyo yandichakuratidza pazasi, ese aripo mu menyu »Webhu Inovandudza.
Asi tisati tasvika pane iyo nguva ini ndoda kugovera rako pachako pfungwa newe. Pane dzimwe nguva, ini pachangu ndakatsamwira Firefox nekuda kwekushayikwa kwemashoko epuratifomu GNU / Linux uye zvimwe zvinhu. Ini ndaitova mumwe weavo vaifunga kuti kukurumidza vhezheni yekuburitswa inogona kunge iri mhosho.
Chokwadi chinotaurirwa. Firefox neshanduro yega yega nyowani inovandudza zvakanyanya. Kwete chete iyo inounza matsva maficha evagadziri vewebhu, asi yaona shanduko inoshamisa mukuita kwayo uye izvo zvinoongwa. Asi ngatidzokerei kumusoro wekutanga.
2 Kuongorora kwe mobile
3 Style mupepeti
4 Dzimwe shanduko
Chikamu chikuru chekusimudzira padandemutande ne Firefox, Inspector, akaverengerwa uye akavandudzwa shanduro shomanene dzakapfuura, asi ikozvino inosanganisira chinhu chitsva icho chingangondibatsira zvakanyanya: Mitemo.
Sezvauri kuona mumufananidzo, ikozvino patinotara chinhu chewebhu webhusaiti, tinogona kuona kukura kwayo, margin, padding, pakati pezvimwe zvinhu. Inoshanda handiti?
Kuongorora kwe mobile
Iye zvino zvave zvemufashoni kushandisa nharembozha kuti ubatanidze neInternet, saka vagadziri vari kushandisa iyo wirirana DesignNdokunge, ivo vanogadzira magadzirirwo anozotaridzika akanaka pane chero skrini kana resolution.
Con Mugadziri Wewebhu uye zvimwe zvekuwedzera zvinogona kukwanisa kuongorora kuti saiti yedu ingatarise sei mukugadzirisa kwakasiyana, uye nhau dzakanaka ndedzekuti hatichazofaniri kushandisa chero chazvo kubvira Firefox 15 inosanganisa kuita uku nekutadza.
Imwe inonakidza yekuisirwa ndeye CSS Styles Mhariri, iyo inotibvumidza kuti tione munguva chaiyo shanduko dzatinogona kuwedzera kune yedu saiti, kuve nekukwanisa kugadzirisa ese machira emashita anoshandiswa mairi.
Iyi Beta 1 inosanganisira dzimwe shanduko dzinonakidza, senge:
Anowoneka muoni wemafaira ePDF anowedzerwa.
Tsigiro yeSPDY networking protocol v3.
Kugadziridzwa kwakasiyana siyana muWebGL.
Iko kushandiswa kwendangariro kunoshandiswa newedzero kwakagadziridzwa.
Inspector dhizaini yakavandudzwa.
Tsigiro yeOpus odhiyo odhiyo inowedzerwa
Tsigiro ye <source> chinhu muHTML5.
Kugadziridzwa kwakasiyana siyana muHTML5 <audio> & <video>
Firefox 15.0 uye 1 GNU / Linux-i686 (en-ES) .tar.bz2
Firefox 15.0 uye 1 GNU / Linux-x86_64 (en-US) .tar.bz2
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Inowanikwa Firefox 15 Beta 1 ine inonakidza nhau kune vanogadzira
Iyo yekutarisa sarudzo yemafoni mbozha inoita kunge inobatsira zvikuru, ndeyechokwadi kuti inobatsira kwazvo basa kana uchigadzira peji rewebhu.
Ndozvazviri. Iwe unosarudza zvisarudzo zvakasiyana uye kana dhizaini yako ikagadziriswa kune akati wandei awo, unogona kuona kuti inotaridzika sei. Zvakare, inogona kutenderedzwa kuti ive yakatwasuka kana yakatwasuka 😀
Chrome inayo zvakare: kurudyi tinya> Wongorora chinhu > tinya pane giya icon pazasi kurudyi> Nyora Mushandisi Agent > sarudza imwe yesarudzo dzenhare uye mu Nyora zviyero zvemidziyo iwe unogadzirisa iyo skrini resolution.
Opera yaitove nayo pamberi pekutengesa kwemidziyo yeserura yawedzera ... xD
Safari yaive nayo kubva zvisati zvaitika nhare mbozha ... xD
(Inhema asi handina kukwanisa kuzvibata)
Opera ... yakafanana naBatman, iro gamba hombe risingazivikanwe ... HAHA
Chaizvoizvo sei Batman unoda zvigadzirwa zvako (Batmobile, Batcave uye Batinventos), nekuti haina nhunzi, uye haina masimba, kana chero chinhu .. hahaha
Kwete, kana izvozvi zvikazoitika kuti Batman anongova mukomana asina kodzero kana dhimoni, huya ... psychopath uyo dai zvisiri zvemagadgeti ese, angave akafanana newe neni ... HAHA
Kutendeseka ini ndatova ndaneta kuti nguva zhinji shanduro itsva ndosaka ndichishandisa Chromium
Kuruboshwe zvishoma kuti ubate Chromium / Chrome
Kunyangwe paine rudo / ruvengo hukama hwandinayo ne firefox kubva pandakatanga kushandisa linux, ichi ndicho browser chandinonzwa kugadzikana nacho, kungave kana zvasvika pakutsvaga kana kugadzira. Ini ndinofunga kuti firefox kuvandudzwa kwekuita kunonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti iri kutanga kuvhara nzvimbo dzaive nadzo uye kwete kurega kuwedzerwa kuchivafukidza.
Kumirira australis mu firefox asap, ndakaiyedza zvishoma mutinhiro uye ini ndaifarira chaizvo maitiro ayo mu kde
chromium zvakare ine inokurumidza kukura kutenderera, inoburitsa mashoma vhezheni kupfuura firefox pagore asi ichiri kuburitsa akati wandei.
Pindura kune kebek
MuLinux hamuna mutsauko wakawanda nekuda kwekuvandudzwa kwakabatana, asi muWindows zvinowanzoitwa zveFirefox zvinogona kutsamwisa nekuti havanyarari sezvazvakaita neChannel.
Iko hakuna kupokana kuti inova yekupererwa, zvakanyanya ini handifarire software inogadziridzwa kazhinji uye iine mashoma nhau uye / kana kugadzirisa. Mhuri yangu inoshandisa windows uye bhurawuza yandaisa ndeye firefox uye otomatiki maapplication anoshanda nemazvo, zvakare, sekuziva kwangu, chromium haina otomatiki inogadziridzwa inoitwa mumawindows.
Izvo zvinova zvekupererwa hapana kupokana, zviri asi ini handifarire iyo software iyo inogadziridzwa kazhinji kazhinji ine mashoma nhau uye / kana kugadzirisa. Mhuri yangu inoshandisa windows uye bhurawuza randakavapa yaive firefox uye otomatiki meseji anoshanda nemazvo, sekuziva kwangu chromium haina kushandisa otomatiki kugadzirisa mumawindows.
Chero zvazvingaitika "havana kunyarara" nekuti zvinoita sekunge ini basa iri na Firefox 13 yakaunzwa mu Windows.
mhuri yangu inoshandisa windows uye firefox uye kubvira gumi nembiri zvigadziriso zvinyararire zvakashanda nemazvo
Kukanganisa kwangu, ndinofungidzira. Nguva yekupedzisira pandakaona Firefox yekuvandudza paWindows zvainetsa.
Uye zvisati zvaitika vaive zvakare vakareruka, mumawindows iwe waifanira chete kuenda ku "Rubatsiro" uyezve ku "About", uko kwainoratidza yega kana vhezheni nyowani yaikwanisa kurodha pasi nekumisikidza nekudzvanya kamwe chete. Ini ndichiri kuda kuzviita pama windows macomputer, ndosaka ndisina kumbobvira ndaisa iyo firefox yekuchengetedza sevhisi.
Musoro we "yakanakisa browser" ndeyekuzviisa pasi, zvinoenderana nekuti ndezvipi zvinodiwa izvo bhurawuza rakanakisa rinofanira kusangana maererano nemaonero eumwe neumwe.
Ini pachangu pane chimwe chinhu chandakagara ndichishoropodza Firefox uye kushomeka kwayo kwehunyanzvi. Mazhinji emaficha ayo emureza haana kugadzirwa navo, asi akamboburitswa nemamwe mabhurawuza, kunyanya Opera neChannel. Zvakafanana naFrankenstein akashongedzerwa nezvikamu kubva kune mamwe mabhurawuza uye akawedzera ine yakanaka "yemahara uye isiri-yekuita purofiti" zita kuti riite senge rakanaka.
Kunze kwaizvozvo, imwe pfungwa yaigara ichindinetsa nezvake yaive yake yekusaita zvakanaka; chimwe chinhu chinopedzisira chaita kunge chasiya kumashure, kunyangwe icho chinobatsirawo chokwadi chekuti ini ndinongova nacho sewechipiri browser uye iriko irimo padhuze Default, iine mashoma ekuwedzera.
Zvandinobvumirana nazvo ndezvekuti webhu dhizaini uye kusimudzira zvakanaka kwazvo; kunyangwe ndichitaura izvi zvakanyanya zveFirebug, asi ini zvakare ndine fungidziro yekuti Gecko inoshanda zvirinani kune mamwe mabasa kupfuura WebKit.
Nekudaro, mukubhurawuza kwemazuva ese, ini zvirokwazvo ndinosarudza iyo yese seti yemabhenefiti iyo Chrome / Chromium inondipa.
Ndinofunga kuti Chromium / Chrome ibhurawuza rakanakisa. Hapana kana chinhu chinoshaikwa kunze kwekunge pamatafura akasiyana (zvirinani kwandiri) kupihwa kwemafaira kunoenda kuburikidza nemutsetse sezvaunonzwisisa, kuti nenzira, Firefox mune izvo kwandiri ine + 100. Nekudaro, ini ndakagara pasi kuti ndione mashandiro anoita vanogadzira kushanda uye kana vachiyedza masayiti mumabhurawuza akasiyana siyana, iyo inonyatsoita hunhu yakagara iri Firefox, ichiteverwa chromium nekusagadzikana kushoma. Zvakaipisisa? dhanzi e Internet Explorer kubva mushanduro 8 pasi.
Zvakare, mukubatana kwakashata kunoshivirira zvikuru Firefox, inopesana neChromium inoshanda zvinotyisa.
Ini ndinofunga kuti maererano nenzira yenzira yekuratidza mapeji hapana hurukuro. Firefox ndeye, kana isiri yakanakisa yezvose, imwe yeakanakisa. Iri mune zvimwe zvinhu painogona kunge isisakwanise kugutsa.
Ini pachangu, ndashandisa mabhurawuza mazhinji kwemakore uye kubhurawuza kwemazuva ese ini ndinofarira mabhenefiti andinopihwa neFirefox + NoScript mukuwedzera kunatsiridza kuwedzerwa padanho rinotyisa. Kwenguva yakareba ndakatsvaga chimwe chinhu chinoshanda kusvika kubasa iri muChromium, asi hapana mamwe eanogadzira plugins andakataura anoitawo (ndakakanganwa kutaura kuti firefox WOT inoshanda uye ndinoshandisa mazuva ese). Ndakaedza zvakare kuwedzera iyo NoScript muChromium uchishandisa yemuno mabrowser maficha asi haina basa. Uye parutivi kubva ipapo, iro rekuwedzera-peji reFirefox rinotarisirwa zvirinani zvemukati meapp pane iyo Chrome Web Chitoro.
Kunyangwe iyo Chromium bhuti nguva iri nani, ndeye masekondi mashoma ayo ane maviri blinks (iyo isingarwadziwe kumirira), uye mukufamba kwangu kwezuva nezuva mutsauko wekumhanya waigara uchingonzwisisika zvishoma, kunyangwe kutaura kuti dzimwe nguva ndaitofunga izvo zvaive kuzviisa pasi.
Sekuverenga kwandakaita, Firefox inoderedzawo iyo Frequency yemaDzidzo ayo.
Sezviri pachena kwete, kana isu tozoona gare gare ..
Chokwadi chinotaurirwa. Firefox ine yega yega vhezheni iri kuvandudza zvakanyanya. "Kwete chete inounza maficha matsva evagadziri vewebhu, asi yaona shanduko inooneka mukuita uye inoongwa."
KUSVIRA-Musoro wenyaya yacho:
Ichokwadi kuti muGNU / Linux Firefox ine zvakawanda zvakakwenenzverwa izvi zvidiki diki izvo zvinokanganisa kufamba kupfuura muWindows, asi mune ino kesi, iwo madheti ndiwo anoita kuti ndishandise mamwe mabhurawuza (mune ino kesi, SrWare Iron, yandinoshandisa mune ese OS) .
Ini ndinogara ndichibatwa kana kurodha akati wandei tabo panguva imwe chete, painotanga kuongorora kudhanilodha kwakafanana (kunze kweizvozvo ibasa risinganyatsoshanda kwandiri, nekuti ini ndatora mafaira ane ngozi nguva zhinji uye Firefox mune yayo »ongororo» Izvo hazvizvione, tenda kunaka kuti ipapo ini ndinogara ndichipfuura iyo antivirus ndisati ndadzivhura). Mushure mekuishandisa, kushandiswa kwakanyanya kwazvo uye bhurawuza rinononoka ...
Uye ini handina PC yakaipa, chii chimwe, PC yangu yese hardware iri kubva gore rapfuura, ine Intel Sandy Bridge processor uye 4 GB ye RAM.Dambudziko harisi neangu Hardware, asi neFirefox.Uye chii chinondinetsa , ndezvekuti itsikidzi dzakaenda eons muFirefox dzisina kugadziriswa (kunyanya, kubvira vhezheni 3.6).
Kudzokera kumusoro, hongu, ndinofunga kuti Firefox ine maturusi akanaka kwazvo evanogadzira, asi ini handifunge chinhu icho vamwe vese vasina.
Uri kutaura nezvazvo Firefox yeWindows, kuti kunyangwe iine zita rakafanana uye hunhu hwakafanana, ini ndinenge ndine chokwadi chekuti haina kufanana papuratifomu imwe pane imwe. Ndakaona shanduko uye zvishoma. Enzanisa Firefox 14 game Firefox 10 uye iwe uchaona mutsauko.
Ndinokoshesa maonero ako.
Kunyangwe zvangu, mumakore ese andakashandisa Firefox, kubva muna 2007 kusvika nhasi, haina kumbopa zvikanganiso zvidiki, uye ndinotaura nezve chiitiko changu nemichina yangu yese. Zvino, mushure memakore mashanu ndichishandisa Firefox paMS Windows, ndichienda kuburikidza neXP, Vista uye naVanomwe, bhurawuza chete rakandipa mashoma mashoma rave iri.
Ndanga ndichishandisa GNU / Linux se Main System yegore rimwe uye Firefox haisati yandipa matambudziko kungave pamushini wangu kana pane yemusikana wangu.
Pasina kupokana Firefox Yekusingaperi;)!
Ndanga ndiri mushandisi akatendeka weFirefox kwemakore, ndakazvienzanisa neChromium, neOpera, pamwe nevamwe vakaita saKonqueror, Rekonq, Midori, Qupzilla, Tsitsi, nezvimwe. Kwandiri, hapana kana icho nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe chinosvika pakukwirira kweFirefox, ndiyo yandinonzwa kugadzikana nayo kure.
Asi izvo zvandiri kuramba ndichinetseka kuti zvinoita sei kuti ichiri kushaya 64 bit vhezheni. Kungoti handikwanise kutsanangura.
Idem, zvisinei iripo, kunyangwe sekusvikira kwave kuri mune alpha mamiriro kwenguva yakareba
Zvakanaka ndangoona uye kwete chete paNightly futi pane yekuburitsa chiteshi
Asi kunyangwe kana paine parinoti iro vhezheni iri x86_64, sarudzo chete inopihwa pane yavo yepamutemo peji ndeye 32-bit imwe, uye ivo pachavo vanozviburitsa pachena pano (kunze kwekunge iro ruzivo rusingachashandi) http://support.mozilla.org/es/kb/Usar%20Firefox%20en%20un%20sistema%20operativo%20de%2064-bit iyo Firefox ndeye 32-bit application.
Ehe, ini ndaiziva kuti paive nechaidziro chiteshi cheiyo 64-bit vhezheni, asi chimiro chayo chekusimudzira chinondiyeuchidza nezveHurd yekusingaperi kusagadzikana mamiriro ... alphas uye mabetas ayo anogara kwemakore nemakore asina kana imwe nhau ... gehena kune madiki mabhurawuza uye vane 64-bit vhezheni, ko Mozilla ine vanhu vazhinji uye nemari zviwanikwa kutakura Firefox kusvika makumi matanhatu nematanhatu?
DNF: Iyo Nyowani Fedora 18 Package Manager